Global Aawaj | के हुन् कोरोनाका नयाँ भेरिअन्टहरू ? के हुन् कोरोनाका नयाँ भेरिअन्टहरू ?
के हुन् कोरोनाका नयाँ भेरिअन्टहरू ?
काठमाडौँ । कोभिड-१९ को डेल्टा भेरिअन्ट फैलिएपछि चीनसहित केही देशमा कोरोनाभाइरस पुनः चिन्ताको विषय बनेको छ। चीनमा १० दिनको अवधिमा तीन सयभन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। हाल चीनमा सङ्क्रमणको परीक्षण बढाइएको छ र यात्रामा पनि प्रतिबन्ध कडा गरिएको छ।
के हो कोरोनाभाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट?
विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको हजारौँ प्रकार अर्थात् भेरिअन्ट छन्।
तीमध्ये डेल्टा या B.1.617.2 भेरिअन्ट एक हो जुन संसारका अधिकांश देशहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यूकेमा यो भेरिअन्टको प्रभाव अधिक रहेको मानिएको छ। त्यहाँ डेल्टालाई ‘भेरिअन्ट अफ कन्सर्न’ अर्थात् चिन्ताको भेरिअन्टका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सूक्ष्म निगरानीमा राखिएको छ।
भेरिअन्ट अफ कन्सर्नको सूचीमा रहेका अन्य कोरोनाभाइरसहरू यस प्रकारका छन्:
अल्फा (B.1.1.7): जुन पहिलो पटक यूकेमा पहिचान भएको थियो र विश्वका पचासभन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको छ,
बीटा (B.1.351): पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान भएको र हाल यूकेसहित कम्तीमा बीस देशमा फैलिएको छ, र
गामा (P.1): पहिलो पटक ब्रजिलमा पहिचान भएको थियो र हाल यूकेसहित दशभन्दा बढी देशहरूमा पुष्टि भएको छ।
भाइरसहरू उत्परिवर्तित भइरहन्छन् र अधिकांश परिवर्तनहरूको महत्त्व हुँदैन। परिवर्तित स्वरूपका केही प्रकारले भाइरसलाई नै असर पार्छन्। केहीले भने भाइरसको असली स्वरूपविरुद्ध हाबी हुँदै भाइरसका कारण रोगलाई अझै सङ्क्रामक र भयावह बनाउँछन्।
के डेल्टा भेरिअन्ट बढी जोखिमपूर्ण हो?
तर यसले सङ्क्रमितलाई गम्भीर रोगी बनाउँछ वा वर्तमान खोपहरूलाई कम प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण नभएको यूकेका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अल्फा, गामा र बीटा भेरिअन्टबाट उत्परिवर्तन भएको N501Y ले भाइरसलाई फैलन र कोशिकामा सङ्क्रमण गर्न बढी सघाउँछ। बीटा र गामाको प्रमुख उत्परिवर्तन E484K ले भाइरसलाई मानिसको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीअन्तर्गतका केही सुरक्षा संयन्त्र छल्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
के खोपहरूले नयाँ भेरिअन्टविरुद्ध काम गर्छ?
ब्रिटेनको पब्लिक हेल्थले गरेको एक विश्लेषणका अनुसार फाइजर वा आस्ट्राजेनेका खोपको दुई मात्रा डेल्टा भेरिअन्ट सङ्क्रमितलाई अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगाउन ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी छ। सोही खोपको एक मात्रा डेल्टा सङ्क्रमितको तुलनामा अल्फा सङ्क्रमितमा बढी प्रभावकारी देखियो। चिकित्सकहरूले हाल पुष्टि भएका र उत्परिवर्तन भइरहेका भेरिअन्टबाट जोगिन खोपको दुवै मात्रा लगाउनु अत्यावश्यक भएको बताएका छन्। भाइरसका नयाँ स्वरूपविरुद्ध काम गर्न हालका खोपहरूलाई नै पुनः डिजाइन गर्न सकिनेमा विज्ञहरू ढुक्क छन्।
यूके सरकारले बायोफार्मास्यूटिकल कम्पनी क्योरभ्याकसँग भावी भेरिअन्टविरुद्ध खोपको विकास गर्ने सम्झौता र पाँच करोड मात्राको अग्रिम माग गरेको छ। यी खोपहरू भेरिअन्टहरू कसरी विकास हुन्छन् भन्ने अवस्था हेरेर वृद्धवृद्धा र जोखिममा रहेका समूहलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ।-बीबीसी